दुबईमा यस्ता नपत्याउँदा कुराले जेल परिन्छ, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन ! जानी राखौ | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
दुबईमा यस्ता नपत्याउँदा कुराले जेल परिन्छ, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन ! जानी राखौ
द न्यूयोर्क टाइम्स/दुबई । दुबई बस्ने अस्ट्रेलियन नागरिक स्कट रिचर्डलाई यस कारण जेल हालियो, किनकि उनले चिसोमा कठ्यांग्रिएका अफगानी केटाकेटीलाई सिरक किनिदिन खोजेका थिए। अदालतले उनी यस्तो सहयोग गर्ने आधिकारिक संस्थामा आबद्ध नभएको भन्दै सजाय सुनायो ।
एक फुटबल टिमका प्रमुख डेभिड हेगलाई ‘ट्विट गरेको’ भन्दै सात महिना जेल हालियो । बेलायती नागरिक हेगले उक्त ट्विट नगरेको दाबी गरे । आफू पहिल्यै जेलमा रहेको र फोन पनि साथमा नभएको उनको जिकिर थियो । अदालतले उनको जिकिर सुनेन ।
कतिपय घटनामा पीडित पक्षलाई नै नैतिकताको कुरा उठाउँदै जेल हालिन्छ। समलिंगी पुरुषले आफू पीडित भएको उजुरी गरे आक्रमणकर्ता त जेल पर्छ पर्छ, पीडित आफैं पनि सजायबाट बच्दैन।
कुनै महिलाले बलात्कृत भएको उजुरी दिए पुष्टि गर्न चार जना पुरुष प्रत्यक्षदर्शी खोज्नुपर्छ। प्रत्यक्षदर्शी फेला नपरे उनी आफू पनि सजायका भागीदार हुन्छिन्। बेलायती अधिवक्ता राधा स्टर्लिङले नैतिक आचरणका नाममा जेल सजाय काटिरहेका सयौं विदेशीको पक्षमा वकालत गरेकी छन्।
‘म दुबई फर्केर आउने कुनै चान्स छैन,’ उनले भने, ‘मलाई यहाँ जस्तो व्यवहार गरियो, त्यो घटनापछि यहाँ खुट्टा पनि राख्न चाहन्न।’ दुबईका स्थानीय भने यस्ता घटनामा न आश्चर्य मान्छन् न त लचिलो हुनुपर्ने कारणै देख्छन्।
‘पश्चिमीहरूको संस्कृति हाम्रो यहाँको अरब संस्कृतिभन्दा फरक हुन्छ,’ दुबई अदालतका प्रमुख न्यायाधीश अहमद शैफले हालै एक अन्तर्वार्तामा भने, ‘कुनै व्यक्तिलाई माझी औंला देखाउनु वा कसैको अपमान गर्नु पश्चिमी देशमा पनि स्वीकार्य होइन, तर कानुनले सजाय दिँदैन। युएईमा बस्ने मान्छेको संस्कृति भने धेरै फरक छ। आखिरमा हामी मुसलमान हौं, र हामीकहाँ यस्ता नैतिक आचरणसँग जोडिएका गतिविधि स्वीकार्य हुँदैनन्।’ उनले भनेजस्तै विदेशीहरू धेरै पक्राउ पर्ने घटना नैतिक आचरणसँग जोडिएका छन्।
उदाहरणका लागि, यहाँ अनुमतिबिना रक्सी खानु गैरकानुनी हो । यहीँ बसोबास गर्ने विदेशीलाई भने खान छुट छ। दुबई घुम्न आएका पर्यटकलाई यसको अनुमति छैन । उनीहरूले मान्यताप्राप्त बारमै गएर रक्सी पिए पनि अवैधानिक मानिन्छ।
त्यस्तै, केटा–केटीलाई विवाहअघि एउटै कोठामा बस्नधरि अनुमति छैन। आफ्नै घरमा पनि अविवाहित केटा–केटीलाई सँगै बस्न कानुनले रोक्छ । दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका २९ वर्षीय इमिलिन कुलभरवेलले बिहे गर्न पक्कापक्की भइसकेकी युक्रेनी केटी इरिना नोहाललाई डाक्टरकहाँ लगेका थिए । पेट दुखेर उपचार गर्न लग्दा डाक्टरले इरिना गर्भवती भएको बताए ।
डाक्टरले थाहा पाउनेबित्तिकै थप उपचार गरेनन्, बरु प्रहरीलाई फोन गरिदिए। इमिलिन र इरिना तत्काल पक्राउ परे। प्रहरीले विवाह दर्ता प्रमाणपत्र माग्यो। उनीहरूले दिन सकेनन्। त्यसपछि दुवैलाई पक्राउ गरेर जेल हालियो। केही स्थानीयलाई भने आफ्नो देशको कानुन बदलिँदो समाज सुहाउँदो नभएको अनुभूति छ।
‘अहिलेको समय दुबईको समाज र युएईलाई नै लचिलो कानुनी व्यवस्थाको खाँचो छ,’ उनले भने। यसबारे दुबईका जिम्मेवार अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया बुझ्न खोज्दा सम्पर्कमै आएनन्।
लिड्स युनाइटेड फुटबल क्लबका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक हेगले आफू २२ महिना कारागारमा छँदा पटक–पटक दुर्व्यवहारको शिकार हुनुपरेको बताएका छन् । प्रहरीले अपराध कबुलनामामा हस्ताक्षर गर्न जोड दिँदै यातना दिएको उनले खुलासा गरेका छन्। हेग आफैंले भने उक्त कबुलनामा कहिल्यै पढ्न पाएनन्। आफूमाथि लगाइएको आरोप के हो भन्ने पनि उनलाई थाहा छैन। कयौं महिना वकिलधरि भेट्न नदिई त्यत्तिकै थुनेर राखिएको उनले बताए।
दुबईमा जेल सजाय हुनसक्ने ‘अपराध’ को सूची लामै छ । कसैलाई बैंकमा पैसा नभएको चेक गल्तीले दिँदा पनि सजाय हुन्छ । क्रेडिट कार्डबाट खर्च गरेको रकम समयमै तिरेन भने जेल जानुपर्छ । कुनै केटा वा केटीको अनुमतिबिना तस्बिर लिनु पनि दुबईको दण्डनीय अपराध हो । कसैलाई छुनु पनि नैतिक आचरणविरुद्ध मानिन्छ र जेल सजायको भागीदार हुनुपर्छ ।
‘युएई सरकार भनेको आफ्नो छविप्रति एकदमै गम्भीर मुलुक हो,’ स्टर्लिङले भने, ‘कुनै घटनाले देशलाई नोक्सान हुन्छ भने सरकारले जतिसक्दो छिटो हल गर्न प्रहरीसँग कुरा गर्नेछ र आवश्यक परे अभियोग नै फिर्ता लिनेछ।’ –सेतोपाटीबाट